Horjoogihii fuliyay weerarkii Manda Bay oo la dilay – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Ali Abdulkadir Ali / February 26, 2020 February 26, 2020
Muqdisho(SONNA) Duqeyn dhinaca cirka ah oo sugan, ayaa lagu dilay hogaamiye ka tirsan Alshabaab, oo lala xiriirinayo weerarkii Manda Bay ee lagu dilay askar Alshabaab la dagaalanta, oo Maraykan ah.
Duqeynta kadib, ayaa lagu xaqiijyey baaritaan in mid ka mid labadii argagaxiso ee lagu dilay weerarkii qorsheysnaa ee ka dhacay meel u dhaw magaalada Saakow ee Jubbada Dhexe 22keedii Febraayo uu ahaa shaqsi lala xiriirinayo weerarkii Al-shabaab ee Manda Bay, Kenya.
Aragagisada la dilay, ayaa lagu yaqaanay in uu madax ka ahaa qorshaynta iyo agaasinka hawlgalada argagaxiso ee xuduudda Kenya, waxaana ka mid ahaa kii dhawaan ka dhacay Manda Bay.
Aragagixisadda labaad, ayaa xaaskiisu ay ahayd xubin firfricoon oo xeeladeedu sareyso oo ka tirsan Alshabab, iyadoo mas’uul ka ahayd fududeynta hawlgalo argagixiso oo baahsan.
Weerarkan, ayaa muujinaya in laga guuleysan doono Argagixisada, iyadoo aan loo eegayn jinsiga (lab iyo dheddig), ee kooxda Argagixisada Al-Shabab ee caadeystay weerarka dadka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya, Taliska Ciidanka Dowladda Mareyka ee AFRICOM iyo AMISOM, waxay sii wadi doonaan tallaabo ka qaadidda Argagixisada arxan-laawayaasha ah ee Al-shabaab, si looga horjoogsado in ay qorsheeyaan ama fuliyaan weeraro, gaar ahaanna laga hortago weerarada ay u geystaan ragga, dumarka iyo caruurta Soomaaliyeed.
Horumar la taaban karo, ayaa laga gaaray Soomaaliya, kaasoo aan dib looga laaban doonin.
Ciidankeena Xoogga Dalka, Danab iyo ciidamada aynu xulufada nahay, waxay al-Shabab kala wareegeen dhul istaraatiiji ah, oo ay ku xoog badneyd kooxda ee Koonfurta Soomaaliya, kaasoo hadda gacanta lagu hayo, lagana sameeyay difaacyo xoog leh.
Mashruuc cusub oo laga dhagax dhigay garoonka ciyaaraha ee Muqdisho